Wafdi isugu jira wasiiro iyo wasiiru dowlayaal oo gaaray magaalada Jowhar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi uu hogaaminayo Wasiiru dowlaha gudaha C/shiid Maxamed Xiddig ayna ka mid yihiin wasiirka Kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Maxamed Cumar Ceymow,wasiiru dowlaha maaliyadda Maxamed Axmed Nuur iyo xildhibaano ka soo jeeda gobolka Sh/dhexe ayaa gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
Wafdjgan oo ka soo degey garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ayaa ujeedada safarkooda lagu sheegay in ay furan shir dib u heshiisiin ah oo beelaha dega gobolka ugaga furmaya magaalada Jowhar.
Wafdigan ayaa waxaa ku soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen iyo ku xigeenada guddoomiyaha gobolka, guddoomiyaha degmada Jowhar C/qaadir Cabdulle Buurfuule.
Ammaanka magaalada Jowhar ayaa aad loo adkeeyay iyadoo wadooyinka magaalada lagu arkayo ciidamo faro badan oo sugaya amniga.